မြင်းမိုရ်ဦး: 春夏秋冬 Spring-Summer-Autumn-Winter
kotoshi no haru wa doko ni ikou ka. kotoshi no natsu wa doko ni ikou ka. haru no sakura mo natsu no umi mo anata to mitai, anata to itai.
kotoshi no aki wa doko ni ikouka. kotoshi no fuyu wa doko ni ikou ka. aki no momiji mo fuyu no yuki mo anata to mitai, anata to itai.
ဒီနှစ်springဘယ်သွားလည်ကြမလဲ၊ ဒီနှစ်နွေဘယ်သွားလည်ကြမလဲ။ springမှာပွင့်တဲ့ပန်းချယ်ရီရော၊ နွေရာသီရဲ့ပင်လယ်ကိုပါ မင်းနဲ့ကြည့်ချင်တယ်။ မင်းနဲ့အတူရှိနေချင်တယ်။
ဒီနှစ်autumnဘယ်သွားလည်ကြမလဲ၊ ဒီနှစ်ဆောင်းဘယ်သွားလည်ကြမလဲ။ autumnရဲ့မေပယ်ရွက်တွေရော၊ ဆောင်းရာသီရဲ့နှင်းလေးတွေကိုပါ မင်းနဲ့ကြည့်ချင်တယ်။ မင်းနဲ့အတူရှိနေချင်တယ်။
ဒီသီချင်းလေးကို သမီးလေးကဘယ်လိုကနေရှာလာမှန်းမသိပါဘူး။ သူ့ဘလော့ဂ်မှာတင်ထားတာနားထောင်ရင်း နှစ်သက်မိလို့၊ နေ့တိုင်းလိုလိုနားထောင်မိပါတယ်။
အပေါ်ကသီချင်းနဲ့စာသားတွေအတိုင်း ဂျပန်ပြည်ရဲ့လေးရာသီမှာ လူတွေခံစားလေ့ရှိကြတဲ့ အထင်ကရလေးတွေ၊ ဂျပန်တွေရဲ့သဘာဝအလှအပတရားကို ရာသီအလိုက်ရှုမြင်ခံစားလေ့ရှိတဲ့ ချစ်စရာဓလေ့ရယ်၊ လေးရာသီမှာ ကျင်းပပျော်ရွှင်လေ့ရှိတဲ့ပွဲတော်တွေရယ်ကို ဒီသီချင်းလေးကထင်ဟပ်နေပါတယ်။ မကြာခင်နှင်းတွေဝေတဲ့ဆောင်းကုန်လို့ ချယ်ရီဝေတဲ့spring ရောက်တော့မယ်။ ချယ်ရီပင်အောက်မှာ မိသားစု-သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ စားရင်းသောက်ရင်း ရယ်မောရင်း hanami (ပန်းကြည့်) ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ၊ နွေရာသီမှာတော့ နွေပွဲတော်တွေသွားလိုက်-ပင်လယ်ကိုသွားလှိုင်းဆော့လိုက်နဲ့ပျော်စရာကာလတွေ၊ နွေညတွေမှာ hanabi (မီးရှူးမီးပန်းလွှတ်ပွဲ) ကိုမိသားစု-မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုခံစားကြ၊ autumn ရောက်ပြန်တော့ ရောင်စုံမိုးမိဂျိ (မေပယ်လ်)ရွက်တွေပေါတဲ့ တောတောင်တွေဆီလျှောက်လည်ကြနဲ့ အမှတ်တရတွေပါဘဲ။ တိုကျိုဆောင်းမှာတော့ကျခဲတဲ့နှင်းကိုမျှော်ရင်း၊ အချိန်ရရင်ရသလို နှင်းတွေဖုံးပြီးလှနေတဲ့ ကီလို ၁၀၀ကျော်သာဝေးတဲ့ ဖူဂျီတောင်ကြီးနားက ရေအိုင်တွေဆီသွားလည်ရင်း လွမ်းမောခဲ့ရတယ်လေ။
၅နှစ်လုံးလုံး ဒီမှာ သဘာဝတရားရဲ့အလှအပတွေကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေဟာ တိုတောင်းလွန်းနေသလိုခံစားရပါတယ်။ လူနေမှုဘ၀၊ သွားလာဆက်သွယ်ရေးအားလုံး၊ ကျန်းမာ-လုံခြုံ-အဆင်ပြေတဲ့ဂျပန်မှာ၊ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေတော်တော်များများရဲ့ဖော်ရွေယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့အမူအယာ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူမှု အကျင့်ကောင်းလေးတွေ၊ ရုပ်ဝတ္တုအရတိုးတက်ခေတ်မီတဲ့စက်မှုနိုင်ငံပေမယ့် တဖက်က သဘာဝအလှအပတရားတွေကို ထိန်းသိမ်းခံစားတတ်နေတဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ဓလေ့ကို ဖူဂျီတောင်နဲ့ရှင်းကန်းစန်-ကျည်ဆံရထားပုံရိပ်တွေ၊ ကီမိုနိုဝတ်ဂျပန်လေးဂျပန်မလေးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေက ဖော်ညွှန်းပြနေပါတယ်။
နောင်တချိန်မှာ ဂျပန်ကို နောက်တခေါက် ထပ်လာလည်ပြီး လေးရာသီအမှတ်တရတွေကိုခံစားချင်ပါသေးတယ်။ တနေ့ပြန်ဆုံဦးမယ်ချယ်ရီရေ...
Posted by Dr. Nyan at 6:00 AM